Ederede Oliva Saikia na Martech Zone |
Edemede site na Oliva Saikia
Iji nwee ihe ịga nke ọma ma lanarị na azụmaahịa, ndị nwe azụmaahịa ga-anakwere ọtụtụ usoro na usoro. Usoro njide nke ndị ahịa dị oke mkpa n'ihi na ọ dị oke irè karịa usoro ahịa ọ bụla ọzọ ma a bịa n'ịba ụba ego na ịlaghachi azụ ahịa azụmaahịa gị. Inweta onye ahia ohuru nwere ike iri okpukpu ise karia ijide onye ahia gi. Bawanye njide ndị ahịa site na 5% nwere ike ịbawanye uru site na 25 ruo 95%. Onu ogugu nke oma ire ere nye onye ahia